Mpanao fihetsiketsehana miatrika ny gidragidran’ny polisy misahana ny rotaka ao Libanona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2015 6:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Deutsch, عربي, English
Reny iray sy ny zanany mandositra ny etona mandatsa-dranomaso nalefan'ny polisy tamin'ny mpanao fihetsiketsehana tao Beirota. Saripika navoakan'i Sara El Ali
Etona mandatsa-dranomaso, tafondron-drano ary bala tena izy, izany no setriny mahery setra niandry ireo mpanao fihetsiketsehana milamina tamin'ny hetsika #YouStink [masiso ianareo] izay nivory tao amin'ny Riad El Solh tao Beirota tamin'ny asabotsy [22 Aogositra] mitaky ny hamahana ny olan'ny fako ao Libanona.
Oloa tombanana ho eo amin'ny 10.000 no tonga tao amin'ny hita maso ho antso ao anatin'ny fisainana tsara hitadiavana “vahaolana maharitra amin'ny olan'ny fanariana ao Libanona.” Tamin'ny 17 jolay, nikatona ny fanatobiam-pako lehibe indrindra tao amin'ny firenena ary nanomboka niavosa nanerana an'i Beirota ny fako raha mbola ratsy fitantana ny olan'ny fako ny manampahefana. Tsy tsara miara-dalana ny fako sy ny vaninandro mafana ary mihamiavosa manaraka ny lalan'i Beirota ny harom-pako ary manapoizina ny rivotra ny fofona mahery ka mampangidihidy ny oron'ny Libaney.
Maro tamin'ireo nizotra ho any amin'ny fihetsiketsehana no nitafy akanjo mihaja ary ny sasany aza nitondra ankizy kely niaraka taminy. Nampihomehy aloha tamin'ny voalohany ny fepetram-piarovana faratampony noraisain'ny tafika sy ny polisy misahana ny rotaka saingy nivadika nihahenjana tampoka ny raharaha rehefa namaly tamin-kerisetra tafahoatra ny mpitandro ny filaminana, nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpanao gazety sahisahy.
Zatovolahy manao fitafiana enti-milomano
Tsy fampisehoan-kery fa fetiben'ny fanantenana. Miaraha aminay
Tahaka ny efa niomana amin'ny hetsika [maimbo ianareo] ihany koa ny mpiambina ny parlemanta libaney a. Jereo anie izao fefy vaovao izao e!
Mpaka sary Karim Mostafa nizara sary Twitter tamin'ilay lasa fifanandrinana maherisetra nateraky ny kotrakotrana nataon'ny polisy misahana ny rotaka:
Ny fotoana nivadihan'ny fanehoan-kery milamina nivadika ho etona mandatsa-dranomaso, tafondron-drano ary bala fingotra.
Ary rehefa tonga ny rano! avy amin'ny fihetsiketsehana tao Beirota tamin'ity folakandro ity.
Mpanao fihetsiketsehana iray nahazo vonjy tamin'ny fihetsiketsehana [masiso ianareo] tao Beirota
Polisy naratra sy nanirery nanomboka nitomany saingy nahazo vonjy tamin'ireo olona nanao fihetsiketsehana.
Ny herivaikan'ny herisetra tonga hatramin'io ambaratonga io no mampisongadina ny zavamisy nikimpian'ny maro. Ho setriny dia nanomana sit-in nanoloana ny parlemanta ny mpanao fihetsiketsehana mandra-pialan'ny mpikamban'ny parlemanta sy hanatontosana fifidianana vaovao. Efa herintaona mahery izay i Libanona, izay efa miaritra fotodrafitrasa ratsy sy ny fahatapatapahan'ny herinjiro, no tsy manana filoha. Tamin'ny 2009 ny parlemanta no nanitatra ny fe-potoana fiasany ho hatramin'ny 2017, tsy misy fifidianana, ary milaza ny fikorontanana ho anton'izany. Ankehitriny ny mpanao fihetsiketsehana mitaky fiovana amin'izany rehetra izany. Efa tsy resaka olana fako intsony izany.
Nancy Fakhoury mizara lahatsary iray mampiseho ny mpanao fihetsiketsehana nihiaka tamin'ny 23 Aogositra, andro faharoan'ny sit-in.
Araho ihany koa [teny anglisy] ny fitantarana ataonay ao amin'ny Global Voices Checkdesk